Pa-O National Organization: ဟိုပုံးမြို့နယ်အတွင်းရှိ အ.ထ.က ကျောင်းများ၌ Terra People Association (TPA) ကမ္ဘာ့လူသား အဖွဲ့အစည်းမှ ပညာသင်ထောက်ပံ့ငွေများ ပေးအပ်
ဟိုပုံးမြို့နယ်အတွင်းရှိ အ.ထ.က ကျောင်းများ၌ Terra People Association (TPA) ကမ္ဘာ့လူသား အဖွဲ့အစည်းမှ ပညာသင်ထောက်ပံ့ငွေများ ပေးအပ်
တောင်ကြီး၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၇) ရက်
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်အတွင်းရှိ အ. ထ. က ကျောင်းများဖြစ်ကြသော အ.ထ.က- ကျောက္ကဆျား၊ အ.ထ.က- စငေါ၊ အ.ထ.က- ကျောက်တန်း ရှိ ရွေးချယ်ခံ ကျောင်းသား/သူများအား ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၇)ရက်နေ့တွင် Terra People Association (TPA ) ကမ္ဘာ့လူသားအဖွဲ့အစည်းမှ (၃)နှစ်မြောက် ထောက်ပံ့ငွေများကို ပါရမီဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ယက် နာယက ဖြားခွန်အုန်းငွေ နှင့် ပါရမီဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ယက် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြားခွန်မောင်ဘော်တို့က သွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပညာသင်ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်ကလေးများ၊ ပညာထူးချွန်သော ကျောင်းသား/သူများ ပညာသင်ကြားခွင့်ရနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပညာသင်ထောက်ပံ့ငွေများကို အ.ထ.က- ကျောက္ကဆျားမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကျောင်းသား/သူ (၆) ဦး၊ အ.ထ.က - စငေါမှ နဝမတန်း ကျောင်းသား/သူ (၆) ဦး နှင့် အ.ထ.က-ကျောက်တန်းမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း(၆)ဦး တို့အား တစ်ဦးလျှင် ကျပ်(၁၅၀၀၀၀) ပေးအပ်မည်ဖြစ်ကာ ယခု ပထမရစ်အနေဖြင့် တစ်ဦးလျှင်ကျပ်(၁)သိန်း ပေးအပ်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ကျန်ရှိသည့် (၅)သောင်းကျပ်ကိုမူ လာမည့် ဒီဇင်ဘာလတွင် ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဆက်လက်၍ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအတွင်းရှိ ဟိုပုံးမြို့နယ်တွင် အ.ထ.က-စမ်းစုတ် ဆီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ အ.ထ.က- ဆီဆိုင်၊ အ.ထ.က-ဘန်းယဉ်၊ အ.ထ.က- ပန်ကန်း၊ အ.ထ.က- နောင်ထောင်ကျောင်းများနှင့် ပင်လောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ အ.ထ.က(၁) ပင်လောင်း၊ အ.ထ.က-တင်းထက်၊ အ.ထ.က (ခွဲ) လယ်ကြား၊ အ.ထ.က- ထီရယ် တို့တွင်ရှိသော အထက်တန်းကျောင်း ကျောင်းသား/သူများ တစ်ကျောင်းလျှင် (၆) ဦးနှုန်းဖြင့် TPA (Terra People Association) ကမ္ဘာ့လူသားအဖွဲ့အစည်း နှင့် ပါရမီဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ယက် တို့ပူးပေါင်းပြီး ပညာသင်ထောက်ပံ့ငွေများ ဆက်လက်ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။